ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတုန်း တက်စာမိပါတယ်။“ရေငတ်တုန်း ရေတွင်းထဲကျတယ်” ဆိုပါတော့။ တက်လာပေးသူကတော့ ဘလော့ဂါ(ပေါက်စလေး)မောင်နွေလပါ။လူငယ်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် ပညာမ ငယ် ပါ ဘူး။(မြှောက်ပေးလိုက်ပြီနော်း)သူပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကလည်း ရေးလို့ကောင်းမယ့် ခေါင်းစဉ် လေး ပါပဲ။ (ရေးမတတ်တာ ခက်ပါတယ်း) သတိတရ တက်စာကျွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်း)။ ခေါင်း စဉ် ကတော့“….ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရ နေ့စွဲများ”တဲ့။ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးဖို့ နေ့စွဲတွေကိုတော့ စောစောကတည်းက Memory 1GB ပဲရှိတာကြောင့်ရော၊ အသက်အရွယ်ကြောင့်ပါ တဖြည်းဖြည်း မေ့တတ်လာတဲ့အတွက် ခုနှစ်၊ရက် အတိအကျမမှတ်မိတော့တာမို့ မှတ်မိတာလေးကို(ရက်အတိအကျ)ရေးပြီး မမှတ်မိတာကိုတော့ ဒီ အ တိုင်းလေးပဲ ဖော်လို လိုက်ထားပါတယ်။
ဘ၀ရဲ့အမှတ်တရ နေ့စွဲတွေကတော့ လူ့ဘ၀ရဲ့ သုံးပုံပုံတစ်ပုံကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာမို့ (ဒီလိုရေး ရင် သောက်ညင်ကက်ကုန်မှာကို..ရိပ်စားမိပါတယ်;)သမီးစံမှာ အများ ကြီးပါပဲ။ပထမဦးဆုံး အ မှတ်ရေ နတဲ့ နေ့ က တော့ ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်း)။မွေးမွေးချင်း ကိုယ့်ဘာသာ မမှတ်နိုင်သေးပေမယ့် အဖေနဲ့ အမေက မှတ်ထား ပေးလို့ အဲ့ဒီ့နေ့ကိုအမှတ်ရနေပါတယ်။ အမေက ပြောပါတယ် “အဲ့ဒီ့နေ့က..လကြီးကို ထိန်ထိန်သာနေတာပဲ သမီးရယ်”တဲ့။“သမီးကို မွေးမွေးပြီးချင်း တစ်လနေတဲ့အထိ အမေ့ အသက် ကို သေ မင်းနဲ့ လွန်ဆွဲ နေခဲ့တာ”တဲ့။(ဒီလိုနဲ့ပဲ အငယ်ဆုံးသား သန်လျင်သားကို ထပ် မွေး ပါ တယ်။း) “ဒါကြောင့် အမေ့ကျေးဇူးကို ကျန်တဲ့သူတွေထပ် ပိုဆပ်သင့်တယ်နော်”တဲ့။(စိတ်ချပါ အမေ ဆို ပြီး တောင်း ကောင်းနေတဲ့မုန့်ဖိုးက ခုချိန်ထိပါပဲး)
အမှတ်ရနေတဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ လေးတန်းနှစ်မှာပါ။ကျောင်းသားခုနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ အတန်းထဲမှာ အဆင့် ၁၊၂၊၃ ကမဆင်းတဲ့နှစ်မို့ပါ။(ရှားရှားပါးပါး အဲ့ဒီ့တစ်နှစ်ပဲ ရခဲ့ဖူးတဲ့အဆင့်တွေပေါ့)“ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုး”တဲ့နှစ်ဆိုပါတော့။ယောကျာင်္းလေးက ငါးယောက်၊မိန်းကလေးကနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ သုံး တန်း နှစ်စာမေးပွဲဖြေပြီးတော့ တစ်ခြားရွာမှာဆောက်လက်စ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ပြီးသွားတဲ့အတွက် အိမ် နဲ့ နီးရာ ကျောင်းတွေကို ပြောင်းရွှေ့ကြရင်း နောက်ဆုံး ခုနှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တာပါး) ။နှစ်ဝက်ေ ရာ က်ေ တာ့ ကျောင်းလက်ရွေးစင်တွေသာ ဖြေရတဲ့ ဥာဏ်စမ်းဗဟေဠိကို မြို့ထဲကျောင်းမှာ သွားဖြေရ ပါ တ ယ်။ သောက်သောက်လဲ၊ခွက်ခွက်လန်အောင် ကျောင်း ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ေ မးခွန်းေ တွ က နိုင် ငံ ရေးဦး တည် ချက်(၄)ရပ်၊ စီးပွားရေးဦးတည်ချက်(၄)ရပ်၊ လူမှုရေးဦးတည်ချက်(၄) ရပ်ကိြုေ ဖပါ တဲ့။ နိုင် ငံရေးက စီး ပွား ရေး ဖြစ်လိုဖြစ်၊ စီးပွားေ ရးက နိုင်ငံရေးဖြစ် လိုဖြစ်နဲ့ ရောသ မေ မွှ ပြီး ဖြေ လာ ခဲ့ပါ တယ်း)။ (ခုချိန်ထိလည်း ရော နေ တုန်းပါ) ဒီမှာ တင်တော်တာ လား ဆိုတော့ မဟုတ် ပါဘူး။ “စည်းနဲ့ဝါး” တီးပြီးဆို ရတဲ့ “တံ တြာ တေ ရှင်” သီချင်းမှာလည်း ပြိုင်ဘက် ကင်းခဲ့ပါတယ်။ ဆိုရ မယ့် သီချင်းက “စည်းနှ စ် ချက်၊ ၀ါးတစ်ချက်” ကိုယ်တီး လိုက် မိတာက “၀ါးနှစ်ချက်၊ စည်းတစ်ချက်” (သိပ်မ လွဲပါ ဘူးေ နာ်း)။ အဲ့ ဒီ့နေ့တွေကတော့ တွေးမိ တိုင်း ပြုံးရင်း အ မှတ်ရနေတဲ့နေ့တွေပါ။
၂၃-၉-၉၈ ခုနှစ်မှာ အဖေဆုံးပါတယ်။အမေ့အတွက်တော့ ရွှေတောင်ကြီးပြိုတယ်ပေါ့။ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ပြိုရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။အမျိုးတွေစုံစုံလင်လင်တွေ့ရတာမို့ပျော်သလိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။(ငယ်သေးတာလည်းပါတာပေါ့ကွယ်)အဖေ့ကျေးဇူးကို ညဖက်အိပ်ရာခင်းပေး၊မနက်မိုးလင်းအိပ်ရာသိမ်းပေး၊စားပြီးတဲ့ပန်းကန်ဆေး ပေးတာလောက်နဲ့ပဲ ဆပ် ခွင့်ရ ခဲ့ပါတယ်။ဖတဆိုးသမီး စဖြစ်ခွင့်ရတဲ့နေ့မို့ အမြဲအမှတ်ရနေပါတယ်။ (ရောက်ရာ အရပ်မှာ တတ်နိုင် သေ လာက် အဖေ့အတွက်အလှူဒါနပြုဖြစ်ပါတယ် အဖေကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။)
နောက်နေ့စွဲတစ်ခုက ရှစ်တန်းနှစ်မှာပါ။ ကလေးပဲရှိသေးတော့. အဆော့ သန်တဲ့ အရွယ်ပေါ့နော်။ (ငါးမူး၊တစ်ကျပ်၊ တစ်ကျပ်ခွဲ၊နှစ်ကျပ်နဲ့ ငါးကျပ်ပြည့်ရင် ဥတစ်လုံးရတဲ့ကစားနည်းမှာ ဥဖမ်းကောင်း တဲ့အကြောင်းတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။)ပြောချင်တာက ကြိုး အခုန်ကောင်း တဲ့ အကြောင်း ပါး)။အဲ့ဒီ့တုန်းက သရေကြိုး နက်နက် လေးတွေပေါ်ပါတယ်။ တစ်ကြိုးကို တစ်ဆယ်ပေး ရပါတယ် ။နှစ်ကြိုးသုံးကြိုးဆက်လိုက်ရင် ကောင်း ကောင်း ဆော့လို့ရနေပါပြီ။ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့.ကြိုးကိုခြေဖျားအောက်မှာဖိပြီး စခုန်ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒူး၊ဒူးပြီးတော့ ခါး၊ခါးပြီးတော့ခေါင်း၊ခေါင်းပြီးတော့ လက်တစ်ဆန့်၊ လက်တစ် ဆန့်ေ ရာက်တော့ မမှီတော့ပါဘူး။မမှီတော့ ကျွမ်းထိုးပါတယ်း)။ကြိုးခုန်တဲ့နေရာမှာ သမီးစံတို့ ပရော် ဖက်ရှင် နယ် ဆိုပေမယ့် အသွားမတော်တစ်လှမ်း ဆိုသလို ကျွမ်းထိုးကောင်းတာ အရှိန် လွ န်ပြီး ကျောင်းသားတွေထိုင်တဲ့ခုံတန်းရှည်အပေါ် ခြေထောက် ရောက် သွားပါတယ်။ (ကျွမ်းထိုးရင်.. တစ်လှမ်း၊နှစ်လှမ်းလောက်.အရှိန်ယူပြီးထိုးမှ ဟိုဘက် ရောက်ပါတယ် ..အရပ် ပုလို့ပါး) ဒီေ တာ့ ခြေေ ထာက်မှာ ဒဏ်ရာနည်းနည်းရသွားပါတယ်။အသက်ကြီးလာရင် ခြေထောက် လှလှ လေးနဲ့ (ရုပ်လေးက လှပြီးသားဆိုတော့;) မင်းသမီးလုပ် မယ်ဆိုတဲ့ အိမ်မက်လေး ..စပျက်တဲ့ နေ့မို့.. အမှတ် ရ နေပါတယ်း)။
ကိုးတန်းနှစ်မှာလည်းနေ့စွဲတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။(ပြောပြီးပါသော်ကော အမှတ်တရတွေက အများကြီးပါလို့း) တစ်နေ့တော့ မြန်မာစာကော ဘိုင်အိုပါ သင်တဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမက လူမှုရေး ကိစ္စရှိ လို့ နေ့ တစ် ၀က်ခွင့် ယူပြီးပြန်ပါတယ်။ ဒီ တော့ ကိုးတန်းစီခန်းကို အတန်းပိုင်ကိုင်တဲ့ အီကို ဆရာ မက မြန်မာစာ အစား ၀င်သင်ပေးပါတယ် ။ ကဗျာ လေး တစ်ပုဒ် သင်ပေး တာပါ။ “ဗုံတော်သား” တဲ့။ အစား ၀င်သင် တဲ့ဆရာမ က..စာမသင်ခင် ကဗျာအ ကြောင်း အရင် ပြောပါတယ်။ “ကဗျာဖတ်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သလို ဖတ် လို့မ ရပါဘူး”တဲ့။“စာဖတ်သလို ဖတ်လိုက်ရင် မူရင်းအရသာ ပျက်သွားတတ်ပါတယ်”တဲ့။ဒီတော့ ကဗျာ ဖတ် ရင် ရေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်အောင် ဌာန် က ရိုဏ်းကျကျ ဖတ်ရပါမယ်တဲ့။ကဗျာထဲက စာသားေ တွ ကေ တာ့…
အဲ့ဒီ့ကဗျာကို ဆရာမက (ရက်ပ်စာသားနဲ့)အမြန်ဖတ်ပြပါတယ်း)။ ဆရာမတိုင်ပေးသလို. ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ကျောင်းသားတွေလည်း အားပါလာပြီး ခုံတွေပါ တီးတဲ့အဆင့် ထိဖြစ်လာပါတယ်။ (ဒါကြောင့် ဒီကဗျာထဲ က စာ သားတစ်ချို့ကို အလွတ်ရနေတာပါး)အတန်းပိုင်ဆရာမ ပြန်ရောက်လာတော့ ကျမကျောင်းသားတွေကို ဒီ လို သင်ရပါရောလားဆိုပြီး ဒေါသအိုးကွဲပါတယ်။ ဆရာ မနှ စ်ေ ယာက် ဒေါ သအိုးကွဲတာ (ကျောင်းသား တွေ ရှေ့ မှာ ပါ)ဗိုက်နှိပ်ပြီး ကြိတ်ရယ်ရတာမို့ အထက်တန်းေ ကျာင်းသားဘ၀ ရှားရှားပါးပါး အားရပါးရ ရယ်ခဲ့ရတဲ့နေ့မို့ အမှတ်ရနေပါတယ်။
ဆယ်တန်းမှာလည်းအမှတ်ရတဲ့နေ့စွဲရှိပါတယ်။(ရက်၊လ၊သာအတိအကျမသိရတာပါ) ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထင် ပါ တယ်း)။ ခုနှစ် ဆယ့် ငါးမှတ်နဲ့ဂန်ထူးပေးတဲ့ဘာသာကို ခုနှစ်ဆယ့်ငါးမှတ်နဲ့ ရခဲ့တာပါ။ မုန့်ဖိုး တစ်သောင်း နဲ့ လက် ကျွတ် တစ်ကွင်း ရပါတယ်။အင်မတန်ပျော်ပါတယ်း)။(သများကြွားလို့ လိုက်ကြွားတယ်မှတ်ပါ :P)
နောက်တစ်ခုက တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာပါ။ ခရစ်စမတ်နေ့ပါ။တစ်နေ့တာတဂ်ထဲမှာလည်း ထည့် ရေးခဲ့ ဖူး ပါ တယ်။“စာလေးတစ်စောင်ရတယ်၊မေးကြည့်တော့ ငါကနောက်တာပါဟ”ဆိုပြီးတော့လေ :P။အဲ့ဒီ့တုန်းက အစ် မချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)က မေးပါသေးတယ်။စာထဲမှာ ဘာရေးထားတာလဲတဲ့။ မပြောပါ ဘူးအမတော် ညမတော်ကိုသာ..အသေသတ်ချင်သတ်လိုက်ပါ :D။အထက်ပါနေ့စွဲကလည်း အမှတ် တ ရ ပါပဲ။
နှစ်ဆယ်ရက်၊ဇူလိုင်၊နှစ်ထောင့်ဆယ့်တစ်ခုနှစ်မှာ အပျော်တမ်းစာမျက်နှာလေးတစ်ခုကို ဖန်တီး၊ ပိုင်ဆိုင် ခွင့် ရခဲ့ ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေ၊ ချစ်သူ၊ ခင် သူ တို့ ရဲ့ ရင်ဘက်ထဲကို နီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ စာမျက်နှာလေးပါ။အမေစံရဲ့သမီးဆိုတော့ “သမီးစံ”လို့ နာ မည် ပေးထားပါတယ်။ သမီးလေးကိုသိပ်ချစ်ပါတယ်း)။ သူ့ကိုတစ်နေ့တစ်ခါမကြည့်ရရင် စားမ၀င်အိပ် မပျော်ပါဘူး။အန်တီတင့်ပြောသလိုပဲ အိပ်မက်ထဲတောင်ထည့် မက်ပါတယ်း)။သူမရှိခင်တုန်းကတော့ မရှိတုန်းမို့ ဘယ် လိုမှ မနေပါဘူး။သူရှိလာတော့အားလပ်ချိန်ထဲက ရသမျှ ဖဲ့ပေးမိပါတယ်။အားလုံးအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့သူလေး ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။(မိဘမေတ္တာပေါ့လေး) ဒီစာမျက်နှာလေးရှိနေရင် တစ်ကိုယ် တည်း အပျိုကြီးပဲလုပ်ရလုပ်ရ နေပျော်ပါတယ် :D။
၁-၁၂-၂၀၁၁ကတော့..အတန်းတစ်တန်းမှာ နှနှစ်နေရင် ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာ လက်တွေ့ သိခွင့် ရတဲ့ နေ့ ပါ။ ပြိတ္တာ တို့မျက်ရည် မြေမကျကောင်းဘူးဆိုပေမယ့်လည်း စပါးပဲရှားရှား ဆန်ပဲရှားရှားဆိုပြီး ကျခဲ့ ဖူး ပါ တယ်။ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေအများကြီးရှိတယ် ဆိုတာတအံ့ တသြသိရ ရင်းနဲ့ အမှတ်ရနေတဲ့နေ့ပါ။
ရေးရင်းရေးရင်းနဲ့ အမှတ်တရနေ့စွဲတွေလည်း (မှတ်မိသမျှထဲက)ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပါပြီး)။ ''လူ့ ဘ၀ ဆိုတာ တိုတောင်း လွန်းပါတယ်" ဆိုတာ လူတိုင်းလက်ခံထားတဲ့ ၀ိသေသ တစ်ခုပါ။ တိုတောင်း လွန်းတဲ့ လူ့ ဘ၀မှာ တန် ဖိုးရှိတဲ့ အမှတ်တရ နေ့ရက်များစွာကိုရှာဖွေစုဆောင်းရင်း ချစ်ခင်ရတဲ့ အစ် ကို အစ်မ ၊မောင်ညီမလေးတို့နဲ့ ဆက်ပြီး ဘလော့ဂင်းချင်ပါသေးတယ် :P
ကဲ...အားလုံးပဲ နေ့စွဲလေးတွေ ဖလှယ်ကြရအောင်နော်း)
(angry bird game ကျေးဇူးပြုထားသူ)အောင်အောင်၊လုလင်သီဟ၊ညီမနန္ဒာ၊
"ပခုံးပြောင်း လွှဲပေးလိုက်ပါပြီ ၊ တာဝန်တစ်ခုလိုသဘောမထားစေချင်ပါ"း))
san htun February 5, 2012 at 10:38 PM
သမံစီးနဲ့အမနဲ့တူတယ်တော့..လေးတန်းတုန်းက ၇ယောက်ပဲရှိတဲ့ အတန်းမှာ ပထမရတာရယ်..ကြိုးခုန်ကောင်းလို့ဒဏ်ရာရတာရယ်..ကိုင်း..ပခုံးပြောင်းတာဝန် လှမ်းယူရတာပ...
ချစ်စံအိမ် February 5, 2012 at 10:54 PM
ညီရဲ February 5, 2012 at 11:05 PM
ညီမရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို လာဖတ်ပါတယ်... ညီမဆရာမလို အစ်ကိုလဲ ရက်ပ်စာသားနဲ့ အမြန်ဖတ်သွားပါတယ်...
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး February 5, 2012 at 11:20 PM
Anonymous February 5, 2012 at 11:25 PM
ဟရို့.. မောင်တလုံး (kss ) ဆို ဘီသူလဲဟ ငါသိတော့ သိသလိုပဲ မိအေး 2ခါနာပြီးသွားပြီ ဒီနှစ်ကျလို့ ကတော့ အမီးဆွဲ ကိုင်ပေါက်မည်..သက်ဆိုင်သူ
ကိုကို ရဲ့ ကိုယ်စား တစ်ဝက်တပျက်ဆိုင်သူ...အိုပါး (kss) ဆို နာမသိဝူးနော်
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 6, 2012 at 1:49 AM
သမီးစံရဲ့ အမှတ်တရ..လေးတွေ ဖတ်သွားတယ်
ပို့စ်လေးဖတ်ရင်း အပြုံးတွေ ဝေအောင်ပါပဲ...
မဝေပဲ မရအောင် အရေးကလည်း ....ကြည့်လေ..:):)
ပြိတ္တာ တို့မျက်ရည် မြေမကျကောင်းဘူးဆိုပေမယ့်လည်း စပါးပဲရှားရှား ဆန်ပဲရှားရှားဆိုပြီး ကျခဲ့ ဖူး ပါ တယ်။..:P:P
အင်း.... ရေးစရာ မရှိ ပျင်းနေတာ ..
Anonymous February 6, 2012 at 5:06 AM
အောင်အောင် February 6, 2012 at 7:51 AM
(Tag) လေးကိုလာရောက်အားပေးသွားပါတယ်...ဘယ်ကနေစရေးရမှန်းတောင်မသိဘူး အမှတ်တရတွေက...ဟဲ..ဟဲ
မြတ်ကြည် February 6, 2012 at 8:05 AM
ရေးချင်တာနဲ့ အတော်ပဲ။ ဘယ်သူများ တဂ် မလဲချောင်းနေတာ။ ဟိဟိ
မဒမ်ကိုး February 6, 2012 at 8:15 AM
♫♪★လွမ်းပိုင်ရှင်★♪♫: February 6, 2012 at 8:35 AM
အမှတ်တရတွေ ပြန်လည်တုးဆွခွင့်ပြုတဲ့ ညီမရေ ကျေးဇူးပါနော်။
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) February 6, 2012 at 8:35 AM
ဒီစာမျက်နှာလေးရှိနေရင် တစ်ကိုယ် တည်း အပျိုကြီးပဲလုပ်ရလုပ်ရ နေပျော်ပါတယ် လို့ စံ ပြောတာနော်။ မြတ် သေသေချာချာ မှတ်သွားပြီ။ :P
"ပခုံးပြောင်း လွှဲပေးလိုက်ပါပြီ ၊ တာဝန်တစ်ခုလိုသဘောမထားစေချင်ပါ" တဲ့။ စံ တကယ် အပြောကောင်းတယ်။
jasmine(တောင်ကြီး) February 6, 2012 at 11:40 AM
မာမီကတော့ အားတာနဲ့ ရောက်သွားပါတယ်
mstint February 6, 2012 at 11:40 AM
တီတင့်ဖတ်ဘို့အတွက် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့စောင့်နေပြီး)
နွေတေးရှင် (မင်းဧရာ) February 6, 2012 at 12:52 PM
ရောက်မယ့်ရောက်တော့လည်း တစ်ခေါက်ဆို တစ်ခေါက်ပါဘဲ
ဘ၀ရဲ့ အမှတ်တရနေ့တွေမှာ စာဖတ်သူကို
ကိုသက်ဝင်း February 6, 2012 at 1:26 PM
သမီးစံရေ အမှတ်တရတွေ ရေးနေတုန်းပါပဲ။ Feeling က ခုထိ မ၀င်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေလို့...
မိုးခါး February 6, 2012 at 4:10 PM
အမှတ်တရလေးတွေ လာဖတ်သွားတယ် .. ပြုံးပျော်လွမ်းဆွေး ရသစုံ ..း)
မေမြို့မိုး February 6, 2012 at 5:30 PM
ခုမှ လာမချော့နဲ့ ခေါ်ဘူး...အစ်မကို..း(
အလင်းသစ် February 6, 2012 at 10:04 PM
မနေ့တည်းက ဖတ်ပြီးသွားတာ... ပြန်ရေးနေလို့ မန့်ဖို့မေ့သွားတယ်...
ညီမလေးရေ.. တစ်ဖက်စီပဲ့နေတာဆိုတော့ အဖေမတူ..အမေကွဲ မောင်နှမ
တော်ကြမယ်ဟေ့... ဘယ်လိုလဲ.. :D
ချယ်ရီမြေ February 6, 2012 at 11:01 PM
ကုန်ပြီလား ရက်စွဲတွေက..။ ချန်ထားတဲ့ အမှတ်တရ ရက်စွဲတွေရှိဦးမှာပါ...။
အင်း.. သမီးစံတက်တာနဲ့တော့ ဘုန်းဘုန်းတွေလဲ လှိုးဝှက်ချက်တွေ ပေါ်ကုန်တော့မှာပဲ...။
cool emerald February 7, 2012 at 11:20 AM
ကိုးတန်းဆရာမ ကိုတော့ သဘောကျတယ်။
ကြည့်ဖူးတဲ့ အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကိုတောင် သတိရမိတယ်။
Candy February 7, 2012 at 9:38 PM
ဟဟဟ မမသမီးစံကတော့ လုပ်ပြီ။ ၀တ်မှုံကန်ဒီဆိုလို့ မနည်းစဉ်းစားလိုက်ရတယ်။ ကိုစည်သူ ညီရဲဆိုမှ ဘာပြောချင်မှန်းသိတော့တယ် ဟဟ။ အော်.. လက်စသတ်တော့ အမေစံသမီးမို့ သမီးစံဖြစ်တာကို.. သမန်စီးလို့ နောက်တော့ဘူးနော် ဟိဟိ :D :P
Thiha Lu Lin February 8, 2012 at 12:50 AM
ဖေဖေ ဆုံးတာချင်းတူလို့ ဖတ်ရင်း ဝမ်းနည်းရတယ်။ :'(
လေလွင့်လူ February 9, 2012 at 10:02 AM
တော်တော်ကိုစုံလင်စွာရေးထားတဲ့ အမှတ်တရလေးအား အားပါတရဖတ်ရှု့ ပီးသကာလ(လနဲ့ ကိုမလွတ်ပါနော်:P)
ကျွန်တော်အလှည့်ရောက်လာပီမို့ (ရွာစားရေ...ပတ်မကြီးသာ တီးလိုက်ပါတော့ အဲ..ယောင်ကုန်ပီ:) )
ရေးစရာနဲ့အတွေးကမ္ဘာချဲ့ လိုက်ပါအုံးမယ်ခင်ဗျ....
rose February 9, 2012 at 9:00 PM
ညီမငယ်လေးစံရေ... အလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ လိုက်မလည်ဖြစ်တာ အစ်မကို တက်ဂ်ထားတာ မတွေ့လိုက်ဘူး။ တက်ဂ်ပို့စ် နှစ်ခု ရေးစရာ ရှိတာ ညီမ တက်ဂ်လေးပါ ပေါင်းရေးလိုက်မယ်နော်း)အချိန် နည်းနည်းတော့ စောင့်ပါနော်။
နွေလ February 10, 2012 at 2:22 PM
ပျော်ရွှင်ခွင့်ရခဲ့သူဆိုတော့ အစ်မက တော်တော်ကံကောင်းတဲ့သူပဲ အစ်မရေ
နွေလ February 11, 2012 at 10:48 AM
ဒီပိုစ့်ကို comment ပေးတာ ငါးခါရှိပြီ
ရေးထားတဲ့ အတွေးတွေလည်း သွားပြီ
နောက်ပြီး မြှောက်တဲ့အတွက်လည်း မြောက်သွားပါတယ်လို့
ချစ်ခင်ရင်နှီးရပါသော - မောင်နွေလ
8Yar February 12, 2012 at 1:24 AM
ဟီးနောက်ကျသွားတယ် ချောတီး သမံစီးရေ။ ဖတ်ရင်းရီရသလို၊ စိတ်မကောင်းစရာလည်းတွေ့တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် "ရင်ဘက်ထဲကို နီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ စာမျက်နှာလေးပါ။ " ဆိုတာတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ :)
အကြောင်းမဲ့ မိတ်ပျက်ခံ ငြင်းဆန်ခဲ့ဖူးသောမိမိနှင့်
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Happy Birthday ဆုတောင်းပေးလိုသူ
(တစ်စုံတစ်ဦးမှ အစားအသောက်အတွက် ဒကာခံမည်ဟုပြောလိုက်လျှင်
Happy Birthday ထအော်တတ်သော အလေ့အကျင့်ကို ဆိုလိုပါသည်။ :D )
ပန်းကန်တစ်ချပ် ဇွန်းတစ်ချောင်းရှိရုံဖြင့် ဗိုက်ဝအောင်ဖန်တီးနိုင်သူ
မန္တလေးကျွဲဆည်ကန် ခရီးသည်ခေါ်သလို ကြင်နာတတ်သူ
အားနည်းချက်ကို အားသာချက်သဖွယ် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း
ဓာတ်ကျနေသောမိမိကို မြုင်ရ သည်မှာ
( ဓာတ်ပုံ ) ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့နယ် ဆင်တောင်သို့ (အောက်တိုဘာလ) ခြေကျင်ခရီး အသွားလမ်းတစ်နေရာ
ဘာရယ်မဟုတ်… အမှတ်တမဲ့နဲ့ လက်ဆော့ ဖန်တီးရာကနေ ဘဝရဲ့ မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ အမြဲတမ်း တန်ဖိုးထား အမှတ်ရနေမယ့် နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့တာ... ^_^
မှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်နော်..i use your toothbrush တဲ့း)
ဟယ်တော်...အလှလေးပါလားးP (ခုလို..ဆလွယ်လေး..ရတဲ့အတွက်..အတိုင်းမသိ.၀မ်းသာမိကြောင်းပါဗျာ..အဲလေ..ရှင်တဲ့..း)
စွံဖို့ရာ..အကြံထုတ်နေကြကုန်သော..ဘလော့ဂါ..အစ်ကို၊မောင်လေးများအတွက်ပါ။း) (အောင်သွယ်တော်..အေဂျင်စီမှ.ခလစ်စမတ်...လက်ဆောင်)
“၀ါသနာကို..အရင်းခံလို့..စီးပွားရှာ” ..နေတာ.. (သူ့ကြည့်ရတာတော့.ဓားတွေကို.ထုတ်လိုက်.သွင်းလိုက်..လုပ်နေပုံရပါတယ်.အသည်းယားစရာနော်)
ဘလော့ဂါတွေလည်း..အဲ့တိုင်းပဲလား..မတိဘူးနော် ..း))